Izandiso, iiComputer, iimodyuli kunye neeplagi zeJoomla! -Izixazululo zeJoomla
IJoomla-Solutions.com Izandiso ze-CMS Joomla!
Ingcali yam kaJoomla
Joomla okanye WordPress?
Yenza iwebhusayithi kunye noJoomla
Zingaphi izandiso endizifakayo eJoomla?
Zeziphi izandiso oza kuzikhethela ukwenza iisayithi zikaJoomla?
Ungayifaka njani indawo yolwandiso okanye imodyuli eJoomla?
Guqula i-Joomla template
Uyenza njani iwebhusayithi kunye noJoomla?
Izixhobo, iimodyuli kunye neeplagi zeJoomla CMS!
I-JoomlAddImigca naphi na
Le phakheji yeJoomla kubandakanya icandelo kunye nemodyuli iya kukuvumela ukongeza indawo zokubeka izimvo kulo naliphi na iphepha lewebhusayithi yakho.
Le iplagi ivumela abasebenzisi ukuba bangene ividiyo ye-Dailymotion kwiprofayile yabo.
Le modyuli ibonisa i-modal popup iwindow ebuza umsebenzisi ukuba aqinisekise ubudala bakhe ngaphambi kokufikelela iphepha.
Ikuvumela ukuba ujonge ubudala bomsebenzisi ngaphambi kokufikelela kwiphepha eligcinelwe abantu abadala, umzekelo.
Le iplagi ivumela abasebenzisi ukuba bangene ividiyo yeTikTok kwiprofayile yabo.
Le plugin kaJoomla ivumela abasebenzisi ukuba bangenise ividiyo ye-YouTube kwiprofayile yabo.
Le iplagi ikuvumela ukuba unxibelelanise uluhlu lwemifanekiso kumanqaku kaJoomla kwaye uzibonakalise ngezantsi.
Le plugin yongeza icandelo le-Biography kwiprofayile yomsebenzisi. Iluncedo kakhulu ukongeza umxholo otyebileyo kunye nokufunda ngakumbi ngalo mntu.
Le plugin kaJoomla ikuvumela ukuba uthumele inqaku okanye ukuziswa kwalo nge-imeyile kwiqela labasebenzisi okanye iidilesi ze-imeyile.
Le iplagi ikuvumela ukuba ungeze umfanekiso weprofayile kwiakhawunti yomsebenzisi kaJoomla. Ukufakwa ngokukhawuleza kunye nokulula kunye noqwalaselo.
Le pakethi yeeplagi ezi-2 ikuvumela ukuba ulawule imicimbi kumanqaku kaJoomla.
Le plugin ivumela ukudityaniswa kweqhosha elithi "Nikela" kwiiprofayili zabasebenzisi.
Le plugin ikuvumela ukuba udibanise iifayile kumanqaku kaJoomla kwaye ubanike mahala okanye bahlawulele ukhuphelo nge-plugin eyongezelelweyo. Amanqaku-Imirhumo.
Le iplagi ivumela abasebenzisi ukuba bangene ividiyo yeVimeo kwiprofayile yabo.
Le iplagi kaJoomla ikuvumela ukuba usebenzise amanqaku njengamashiti emveliso. Akukho sidingo sokufaka isisombululo esinzima kunye nokuchitha ixesha kwe-e-yorhwebo ukulungiselela. Le iplagi yongeza ukusebenza kokuthenga ngokuthe ngqo ekuhleleni inqaku.
Le plugin ikuvumela ukuba ulawule ubudlelwane phakathi kweeakhawunti zabasebenzisi bakaJoomla.
Wanelisiwe okanye ubuyiselwe imali
Ukuba uthenge enye yeemveliso zethu kwaye ayihambelani nawe, siyathembisa ukukubuyisela ngokupheleleyo.
NoMot de oublié wuwela?
Izandiso zethu ziJoomla 3.x ziyahambelana.
Apache 2.0 kunye +
Nginx 1.0 kunye +
IMicrosoft IIS 7
PHP 5.3.10 kunye +
I-MySql 5.1 kunye +
Umncedisi we-SQL 10.50.1600.1 kunye +
I-PostgreSQL 8.3.18 kunye +
Sebenzisa amanqaku kaJoomla njengamaphepha emveliso!
Ukuphuhliswa kweJoomla! Izandiso
Izandiso kunye nokunikezelwa kwazo
Ngaphandle kwento ...
Cofa apha ukufikelela kwisiza sedemo
Ii-plugins: Yongeza intsimi evela kwiContentPrepareForm function
Ungayitshintsha njani itemplate kaJoomla
Zenzele indawo yakho yeJoomla ngezandiso ezilula nezikhanyayo!
Fumanisa kwiphepha lasekhaya lesiza sam, okanye kwiimenyu, ukhetho olubanzi lwezinto ezilula kunye nokukhanya ukongeza kwiiwebhusayithi zakho zeJoomla. Ungasebenzisa iiplagi zam, iimodyuli kunye nezinto zokucebisa iwebhusayithi yakho, ibhlog okanye i-Ecommerce usebenzisa iJoomla CMS.
Ndikunika nezifundo kunye nezifundo zokusebenzisa iJoomla, ezinje ngendlela yokusebenzisa itemplate, indlela yokongeza inqaku elitsha, indlela yokwenza ivenkile, ukwenza iimodyuli, uphononongo nokunye okuninzi. Uya kwazi ngakumbi ngazo zonke iindaba eziqhubekayo kwaye uza ngebhlog yam.
Phakathi kweenkqubo zolawulo lomxholo ezidumileyo ezinje ngeDrupal, i-Wordpress, iJoomla, iJimdo, i-Prestashop okanye i-Shopify, ndikhethe uJoomla ekwenzeni iiwebhusayithi zam zokubonisa, iibhlog okanye nakwiivenkile ezikwi-Intanethi. Iphaneli yayo yeempendulo ze-css eziphendulayo ezihambelana nee-smartphones kunye neepilisi, iJoomla namhlanje sisixhobo esifanelekileyo sokwenza iwebhusayithi. Ngaba unayo iprojekthi kwaye ufuna ukuqala ngokukhawuleza? Fumana igama lakho lesizinda, ukusingathwa kwewebhu kunye nokufikelela kwi-ftp kumamkeli owukhethileyo, emva koko, faka iJoomla kwaye uzivumele ukhokelwe kulungelelwaniso lwayo olulula nolunomdla. Ukuba ungumphuhlisi onjengam, ungaya phambili ngakumbi kwaye uphuhlise izandiso zakho: Imifanekiso yesilayidi, imifanekiso yemifanekiso, isilayida semifanekiso, iiwijethi, inkqubo yesaziso, umnikelo wokuhlawula, umphathi wentlawulo, umphathi weefayile, inkqubo yolawulo lokuphawula, unyaka wokujonga, ikhalenda kunye nolawulo lomsitho, ulawulo, ukudityaniswa kwevidiyo, ukuphathwa Iintengiso ezichongiweyo njl njl.
NgoJoomla, ukudala iwebhusayithi kuyakhawuleza. Thatha ithuba lokujongana nolawulo kunye nabahleli bayo beWYSIWYG ukutyebisa umxholo wakho, ukuphucula ireferensi yakho yendalo, ukuvela kwiinjini zokukhangela, ukufumana ukucofa kunye nokwenza ngcono ukuthengisa kwakho.
Ilula kwaye inomdla, uJoomla undenzele i-CMS efanelekileyo. Ukwenza indawo yakho akukaze kube lula.
Clement, ekhethekileyo ekudalweni kweendawo zeJoomla
Ilungelo lokushicilela linikezelwe i-Jojla.
Joomla! ® igama lisetyenziswa phantsi kwelayisensi enqamlekileyo evela Vula uMthombo weMicimbi eUnited States nakwamanye amazwe.
IJoomla-Solutions.com ayihambelani kunye okanye ixhaswe nguMthombo oVulekileyo weMicimbi okanye iJoomla! Iprojekthi.
SEO, ubhalo lweWebhu
Imigaqo kunye neemeko